Nbudata Tom Airbus A330-200MRTT FSX - Rikoooo
downloads 30 898
Ihe nlereanya nke Thomas Ruth, Nwelite site na Chris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Emelitere na 03 / 06 / 2018: Ugbu a kwekọrọ na Prepar3D v4 +, ebe obibi abụọ: Tanker German na RAAF, ihe mgbapụta ọhụụ, ederede HD ọhụrụ maka kọpa akpọrọ, ụda ọhụrụ, 2d ọhụrụ, gbakwunyere FMC, gbakwunyere Autoland CAT II na III, kwukwara Airbus GPWS.
Onye na-eburu nnukwu ụgbọ mmiri dị oke mma maka ụdị ọ bụla FSX na Prepar3D. Abia na akpukpo ukwu na udiri omenala. Soro na ndagide na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-agụ akwụkwọ ntuziaka ahụ iji mụta otu esi eji ya.
N'okpuru nseta ihuenyo nke ntanye ntụrụndụ (red circle) dị naanị site na ikpo okwu dị n'elu.
Nda ihuenyo dị iche
Origins na nkọwa nke ezigbo ugbo elu:
The A330 Multi Ọrụ tanka Transport (MRTT) bụ a agha emepụta nke Airbus A330-200 airliner. Ọ e mere ka a dual-ọrụ ikuku na-ikuku refueling na iga ugbo elu. N'ihi na ikuku na-ikuku refueling ọzọ na A330 MRTT nwere ike onwem na a Nchikota ọ bụla nke na-esonụ usoro:
* Airbus Military efe n'elu na Refuelling ọganihu System (ARBS) maka awụnye-onwem erite ugbo elu.
* Cobham 905E n'okpuru-nku refueling pods maka nyocha-onwem erite ugbo elu.
* Cobham 805E fuselage Refuelling so (FRU) maka nyocha-onwem erite ugbo elu
* Universal efe n'elu na Refuelling awụnye System Installation (UARRSI) maka onwe refueling.
The A330 MRTT nwere a kacha mmanụ ụgbọala ike nke 111,000 kg (245,000 lb). Standard mmanụ ụgbọala ikike na-enye ohere ahụ e ji ebu nke ọzọ 45,000 n'arọ nke ibu. The A330 MRTT si nku nwere nkịtị Ọdịdị na anọ engine A340-200 / -300 na mesikwuru arịọnụ ọnọdụ maka A340 si outboard engines. The A330 MRTT si nku ya mere-achọ obere mgbanwe maka ojiji nke ndị a hardpoints maka nku refueling pods.
The A330 MRTT ụlọ e mere iji hụ na kacha aba configurations ọ bụla na klas, na jirichaa ma ikike na nkasi obi. The ụlọ nwere ike ahazi na a nnukwu iche iche nke layouts si 253 oche a atọ klas nhazi, site 298 njem na a abụọ-otu nhazi, ka 380 njem na otu klas nhazi. The ụlọ na-juputa na ihe attractively n'oge a haziri. Atụmatụ ndị a nwee a zuru ezu nso nke configurations si maximized usu ndi nāpunara madu iga mgbagwoju customization adabara VIP na ọbịa ọzọ. Nhọrọ ọrụ ụgbọelu Ezumike ogige (CRC), dị na-atụ ụlọ nwere ike arụnyere maka a mapụtara akwọ ụgbọ iji mee ka oge maka a ozi. The njem ụlọ nke A330 MRTT nwere ike nyere na a set nke mbughari airstairs aka arụ ọrụ na njem ịbanye na-ahapụ ugbo elu mgbe airbridges ma ọ bụ ala support ngwá anaghị adị.
The A330 MRTT nwekwara ike ahazi na-arụ Medical esi kpọpụ mmadụ nile (Medevac) ọzọ. The nnukwu size nke fuselage kwe kacha mgbanwe na ana achi achi nkasi obi niile ndị ọrịa, eg ruo 130 ọkọlọtọ stretchers nwere ike rụrụ.
Dị ka A330-200, ndị A330 MRTT agụnye abụọ ala oche ibu compartments (-atụ na AFT) na a nnukwu ebe ike nke ozokwa na-egosi na egosipụta ọtụtụ ihe nke ugbo elu. The ibu jide e gbanwetụrụ na-enwe ike ibufe ruo 8 agha pallets na mgbakwunye na nkịtị ULD.
The egosipụta ọtụtụ nke A330 MRTT enyere dị ukwuu nke bu ibu nhọrọ a ga-ebu na ịnara isi oche ibu ogige. Site ọkọlọtọ azụmahịa containers na pallets site agha, ISO na NATO pallets (gụnyere oche) na containers, ka ngwá agha ọ na ndị ọzọ na nnukwu ihe nke na-kwajuru site na a ibu ụzọ.
Standard azụmahịa A330-200s na-napụtara Airbus Final Assembly Line na Toulouse (France) na Airbus Military Nchigharị Centre na Getafe (Spain) maka kwesịrị ekwesị nke refueling usoro na agha avionics. The mbụ nnyefe na-na igba egbe ahịa, Australia na-zubere maka n'etiti afọ-2010. Qantas Defence Services na-n'ịtụgharị anọ A330-200s na ya Brisbane Airport owuwu na nnọchite nke EADS maka RAAF.
Onye edemede: Ihe nlereanya nke Thomas Ruth, Nwelite site na Chris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Airbus A340-300 Olympic ụgbọ FSX